Inja yami isinyamalele, ikati lami libalekile, isilwane sami sine-chip kodwa asibhalisiwe! | Internationale Hunde & Katzen Datenbank
Ngiphelelwe yithemba, kufanele ngenzeni manje?
Ngingaziswa kanjani uma isilwane sami sitholakele?
Ukuzwa lokho njengomnikazi wesilwane, kepha ikakhulukazi njengomthandi wezilwane, kwakuhlala kubi njalo!
Futhi yilokho kanye ukuphelelwa yithemba kwabantu okwaba yisinqumo esinqumayo ngo- 2005 lapho sanquma ukuthola i- “Chipzentrale”. I-database yezilwane ezifuywayo lapho ungagcina khona inani le-microchip yakho oyithandayo nemininingwane yakho yokuxhumana.
Noma ngabe useholidini noma usekhaya.
Imininingwane yakho ingafinyeleleka kusuka kunoma yikuphi emhlabeni ngezilimi eziyi-109.
Amahora angama-24 ngosuku – izinsuku eziyi-7 ngeviki – izinsuku ezingama-365 ngonyaka.
Faka isithandwa sakho ku-database yethu namuhla, ngoba “Kuphephe kangcono kunokuzisola”
Inhloso kuphela ye- “chip centre” ukuletha abantu nezilwane ndawonye ngokushesha okukhulu “uma kwenzeka ingozi” .
Futhi kulula lokho: Ubhalisa isithandwa sakho lapha bese ufaka imininingwane yesilwane sakho sasekhaya nemininingwane yokuxhumana ongathanda ukwaziswa ngayo lapho isilwane sakho sitholakala.
Yonke idatha manje egcinwe kwi-server yethu iphephile futhi lungatholakala nganoma yisiphi isikhathi ngokuhlola , emhlabeni wonke , futhi izilimi 109 !
Chip centre – iphephile iphephile
Iwebhusayithi yethu ngokuyinhloko iyinjini yokusesha yezilwane ezilahlekile!
Ngokuzenzakalelayo, awekho “amaphrofayili” ezilwane ashicilelwa kuwebhusayithi yethu!
Nguwe kuphela onquma ukuthi “iphrofayili” yesilwane sakho iyabonakala emphakathini noma cha!
Ngokuzenzakalelayo, imininingwane yakho yokuxhumana ayibonakali kunoma ubani!
Imininingwane yakho igcinwa kuseva yethu ebethelwe ye-SSL!
Amaphrofayli ezilwane akhonjiswa kuphela ngemuva kosesho olufanayo!
KUPHELA idatha engaseshwa, itholakale futhi iboniswe oyikhiphayo!
Iwebhusayithi nomsebenzi wokusesha uyatholakala emhlabeni wonke ngezilimi eziyi-109!
KULUNGILE, kepha manje entweni ebaluleke kakhulu!
Kuyadingeka yini ukuthi kufakwe i-chip esilwaneni?
Yebo, kuya ngokuthi uhlala kuliphi izwe nokuthi unasiphi isilwane.
Kwamanye amazwe kuphoqelekile ukuhlinzeka yonke inja endala kunezinyanga eziyisithupha nge-transponder, evame ukubizwa nge-microchip. Emazweni amaningi, ngakolunye uhlangothi, yizinja zezinja kuphela ezihlukaniswe “njengengozi” ezidinga i-chip. Ngakho-ke ukuthi isilwane sakho sidinga i-microchip noma cha kuya ngezici eziningi zomthetho.
Njengoba umnikazi isilwane wemfanelo, kufanele namanje ake darling yakho, kungakhathaliseki inja, ikati, unogwaja noma ihhashi, faka chip transponder, ngoba “ephephile kangcono ukwedlula sorry” .
Buza udokotela wezilwane wakho ngenombolo enezinombolo eziyi-15 ye-chip transponder bese ufaka okuthandayo kudathabheyisi yethu.
Vele akudingekile ukuthi isilwane sakho sibe ne-microchip yokuyifaka lapha. Njengoba izinjini zethu zokusesha eziyinkimbinkimbi zinenani elikhulu lama-algorithms wombuzo, ayikwazi ukucinga kuphela inombolo ye-chip transponder, kepha futhi nokungena kwezinombolo ze-tattoo noma izinombolo zentela kanye nezici ezikhethekile isilwane esinazo. Injini yethu yokusesha iyakwazi ukuthola yonke idatha oyifakayo bese uyifaka ohlwini lwemiphumela yosesho. Usenokulawula okugcwele kwemininingwane yakho, ngoba kuzokhishwa kuphela idatha oyikhiphayo.
Ngakho-ke kungani kufanele ungeze isithandwa sakho ku-database yethu?
Impendulo yalo ilula ngoba iwebhusayithi yethu itholakala ngezilimi ezingu-109 e , futhi azikho ezinye semininingwane isilwane njengoba ngezindlela eziningi ukuba atholakala futhi baxhumane ngqo njengoba maphakathi chip. Isithandwa sakho sivela emininingwaneni eminingi yasendaweni, kepha uma okubi kufika kokubi kakhulu, kufanele uqale uthinte opharetha wedatha, owazisa umnikazi wesilwane ukuthi isilwane sitholakele.
Futhi iqiniso ukuthi ezimweni eziningi kuthatha isikhathi eside, ngoba kuyimpelasonto, umsebenzi ophethe uhambile, uyagula noma useholidini, futhi isikhathi esiningi esiyigugu siyadlula , isikhathi lapho isilwane sakho sibe nawe isikhathi eside kungenzeka. Futhi uma, uNkulunkulu engavumi, “icala elibi kakhulu” kufanele livele, ungathola nethuba lokusetha isimo sesilwane sakho ukuthi “Silahlekile” kusizindalwazi sethu , esikukhombisa ngokushesha esigabeni esithi “IZILWANE EZIPHOSHAYO” , nephrofayili kufaka phakathi neyakho Imininingwane yokuxhumana ibuye ibonakale ngokushesha kuzo zonke izivakashi zewebhusayithi yeChipzentrale .
Uma ubheka ikhasi demo, i wathola isilwane uzovela kule imiphumela yosesho kanye kwi “Kushoda Izilwane” ikhasi. Chofoza lapha ukuya ekhasini lesampula lezilwane ezingekho
I-plus enkulu yesikhungo se-chip
Ungagcina imininingwane eminingi yokuxhumana ku-database yethu, ebonakala ngokushesha nje lapho isilwane sakho sivela emphumeleni wosesho. Vele, yonke imininingwane ingeyokuzithandela , faka okuningi noma okuncane njengokufunayo. Lapho ubhalisa okokuqala eChipzentrale, konke okumele ukwenze ukufaka igama lomsebenzisi elikhethwe ngokukhululeka , ikheli lakho le-imeyili negama lesilwane sakho. Ngemuva kokubhaliswa ngempumelelo uzothunyelwa ku-akhawunti yakho yangasese. Le akhawunti ivikelwe ngephasiwedi futhi nguwe kuphela ongakwazi ukuyifinyelela futhi uyihlele. Kule akhawunti, “iphrofayili” yakho, ungafaka idatha yesilwane sakho salo lonke ulwazi lokuxhumana ofuna ukukunikeza ngokuzithandela.
Ungafaka idatha elandelayo ku-database yethu:
Imininingwane yokuzithandela ngesilwane: ubudala, izinhlobo, uhlobo, i-chip ID, inombolo yentela, inombolo ye-tattoo, ubulili, umbala, izici ezikhethekile njengombhalo wamahhala.
Imininingwane yokuzithandela enikezwe ngumnikazi yokwazisa esimweni esiphuthumayo: igama, inombolo yocingo, inombolo yocingo yeselula, ikheli, enye ikheli le-imeyili, iwebhusayithi yakho, amaphrofayli akho ezinkundleni zokuxhumana ezifana ne-Facebook, Twitter, Linkedin, Google, Instagram, kodwa futhi ne-Skype ID, i-Youtube, i-SoundCloud noma i-VKontakte.
Akunanoma iyiphi enye i-database yezilwane enikeza le nsizakalo, futhi kubaluleke kangakanani lokhu ukuthi iqiniso lokuthi eJalimane, e-Austria naseSwitzerland kuphela izilwane eziyizinkulungwane ezingamakhulu ambalwa ziyanyamalala minyaka yonke. Kulinganiselwa ukuthi kukholakala ukuthi kusezweni lonke
Izilwane ezifuywayo ezingaphezu kwezigidi ezinhlanu ( 5 million ) ziyanyamalala minyaka yonke.
Lo muzwa omuhle wokuba nomngane …
Ngeshwa, iqiniso elidabukisayo ukuthi inani elikhulu lezilwane ezifuywayo kubikwa ukuthi lilahlekile nsuku zonke.
Akuzona zonke ezinengozi, ngoba izilwane eziningi ziphinde zivele ngesikhathi esithile ezingadini ezingaphambili, ezindaweni zokukhosela izilwane, ezinhlanganweni zezenhlalakahle zezilwane noma emitholampilo yezilwane. Izilwane eziningi, nokho, ikakhulukazi izinja namakati, zibanjwa ngabadobi bezilwane zalokho okubizwa nge- “animal mafia” bese zinikezwa ukuthengiswa futhi ngeziteshi ezimnyama nasezimakethe ezahlukahlukene noma ezindaweni zokuphumula zomgwaqo.
Isifundi se-elekthronikhi sezilwane
Okuhle ukuthi kuvame ukuba nezishoshovu eziningi zamalungelo ezilwane kulezi zindawo, futhi cishe ngaso sonke isikhathi baba ne-chip chip electronic nabo. Ngakho-ke uma isilwane sakho sifakwe i-transponder chip futhi lokhu kufundwa esizeni, umzuzwana ngamunye kubaluleke kakhulu ukuthola ukuthi ungubani umnikazi bese uthinta yena NGOKUSHESHA , ngisho nangaphambi kokuba amasela ashiye insimu futhi isilwane sakho singanyamalala unomphela .
Kepha kulapho inkinga yangempela ilele khona, ngoba isiphi isizinda semfuyo isilwane sakho esibhaliswe kuso kufinyelela kudokotela wezilwane wakho. Imvamisa, isilwane sakho sibhaliswa kolunye lwezindawo ezinabelwe kakhulu, ezinendawo yangakini, ngakho-ke akunakwenzeka ukuthola umhlaba wonke, ngoba akuwona wonke amahhovisi okubhalisa axhumene futhi ngokuqinisekile awabambisani ngokufanele omunye nomunye.
Ngalesi sizathu, kubaluleke kakhulu ukuthi ubhalise isithandwa sakho ku- database emaphakathi efana neyethu efinyeleleka emhlabeni wonke futhi etholakala ngezilimi eziyi-109 . Ngoba masithembeke, udokotela wezilwane ovela isib.Hungary, iCzech Republic, iRomania, iBulgaria, i-Italy, iSpain, i-USA, iMexico noma enye indawo iba nobunzima bokuthola indlela yabo ku-database yolimi lwesiJalimane kuphela noma i-database ngolimi olungajwayelekile kuye. Ngaphandle kwalokho, uzoba nezinkinga ekwenzeni umbuzo we-database abese ekwazi ukufunda imiphumela.
Kepha sekwanele ngophawu olumnyama, ngoba izindaba ezinhle ukuthi yonke inqubo yesimanje yezilwane, yonke indawo yokuhlala izilwane, yonke inhlangano yenhlalakahle yezilwane, futhi manje izishoshovu eziningi zamalungelo ezilwane ezizimele zine-chip chip ehambelana nayo. Ngenombolo yokukhomba enamadijithi ayi-15 ku-chip efundwa ngale ndlela , unganquma umnikazi wesilwane esitholakele nayo yonke imininingwane yaso yokuxhumana ku-database yethu kungakapheli imizuzu nge-Intanethi, kunoma iyiphi indawo emhlabeni futhi ngokushesha azise ukuthi intandokazi yakhe isitholakele . Ngoba wonke umuntu onesilwane esifuywayo uyazi ukuthi awukho umuzwa ongcono kunokugcina umcebo wakho uphephile ezandleni zakho futhi.
Faka isithandwa sakho ku-database yethu manje.